12/02/13 ~ Myanmar Forward
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့ချင်ရင်
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ | 1 comment
ဒါပေမယ့် အရည်ချင်းတော့ တန်းတူအောင်တန်းညှိလာခဲ့
၁၀ တန်းမအောင် ဘွဲ့မရတဲ့ကောင်က်ို ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးပေးလိုက်လို့
ခင်ဗျားတို့ ကချင်တပ်မတော် ကရင်တပ်မတော်က ကာချုပ်အပါဝင် လူအယောက်၂၀၀၀ လောက်နဲ့
တိုက်စရာရှိရင် ကျုပ်တို့ငါးသိန်းကအသေခံတိုက် ခင်ဗျားတို့ အယောက်၂၀၀၀ ကမှောင်ခိုလုပ်မယ် ဘိန်းစိုက်မယ်
ကျုပ်တို့က အရပ်သားအစိုးရ လက်အောက်ခံတပ်
ခင်ဗျားတို့က ပြည်နယ်အစိုးရလက်အောက်ခံတပ်လို့ ခွဲခြားပြီး
ခြုံခို မိုင်းဆွဲ မခံနိုင်တော့ ဗမာတပ်မတော်က ပြန်ဗျင်း
ကရင်တပ်မတော်နဲ့ ရှမ်းတပ်မတော်နဲ့က အချင်းချင်း စားခွက်လုရင်း တိုက်ပွဲဖြစ်နဲ့
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စစ်ပွဲကြီးကျင်းပ ပေးသလိုဖြစ်မနေဘူးလား
အဲ့ဒီတပ်မတော်တွေအားလုံးကို လက်နက်ရိက္ခာလစာ အပြည့်ဝ ထုတ်ပေးဖို့ ဘယ်မှာလဲ ဘက်ဂျက်
သူပြည်နယ် နဲ့ သူပြန်သိမ်းပြီး
ခွဲထွက်သွားတဲ့ အချိန်ရောက်မှ ကျုပ်တို့ ၅ သိန်းက အသေခံပြီး ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲအောင်ပြန် လိုက်သိမ်းပေးရမှာလား
ကချင် ကယား ကရင် ချင်းတွေမခွဲခြားဘူး
တပ်မတော်ကို စိတ်ဝမ်းမကွဲ အောင်တပ်စုတစ်စည်းထဲဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာ
သူ့သမီးဖြစ်သူက ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် ပြင်ဖို့ ခြေနဲ့လိုက်ဖျက်နေတယ်
(၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး အားကစား
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် နေ့ရက်အဖြစ် (၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လက်ခံ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ထပ်မံထူးခြားမှု ကတော့ ''မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး'' အားကစားနည်းကို ထည့်သွင်းကျင်းပ ယှဉ်ပြိုင်စေ ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး အားကစားနည်း ထည့်သွင်း ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးနော်ထောင် ဦးစီးသော မြန်မာခြင်းလုံး အားကစား အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့သို့ သွားရောက်၍ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပိုက်ကျော်ခြင်း အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အာရှ ပိုက်ကျော်ခြင်း အဖွဲ့ချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံပြီး (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး အားကစားနည်း ထည့်သွင်း ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် များကို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ၍ အမျိုးသား ခြင်းလုံး အားကစားနည်း ငါးမျိုး၊ အမျိုးသမီးခြင်းလုံး အားကစားနည်း သုံးမျိုး ထည့်သွင်း ကျင်းပရန် ညှိနှိုင်းထားခဲ့သည်။
အမျိုးသား ပြိုင်ပွဲတွင် အခြေခံ ထိချက်(၆)ချက် ဘယ်၊ ညာစုံ မျိုးတူမျိုးကွဲ အတွဲ ဒုတိယအဆင့် မျိုးတူ ပြိုင်ပွဲများ၊ အမျိုးသမီး ပြိုင်ပွဲတွင် အခြေခံ ထိချက် (၆)ချက် ဘယ်၊ ညာစုံ မျိုးတူမျိုးကွဲ ပြိုင်ပွဲများကိုလည်း ထည့်သွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အားကစား တာဝန် ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ ဤသို့ မြန်မာ့ရိုးရာ အမွေအနှစ် အစစ်အမှန်ဖြစ်သော မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံးအားကစားနည်းကို ထုတ်ဖော် ကျင်းပခြင်းသည် ''အာရှနိုင်ငံ''များတွင် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံးသမိုင်းသည် အစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သည်။ ''ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခြင်းလုံးခတ် ကစားခြင်း အလေ့အထသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၌ စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သနည်း''ဟု ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်း၏ နှစ် (၅ဝ)မြောက် အခမ်းအနားကို ၁၉၅၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့စဉ် သတိုးသီရိ သုဓမ္မ J.S ဖာနီဗယ်သည် မြန်မာတို့ ရှေ့က ပျူလူ မျိုးတို့သည်လည်း ခြင်းခတ်ကစားသည့် အလေ့အထ ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဲဒီနောက် ခရစ်နှစ် ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ် မန္တလေး မြို့ အိမ်တော်ရာ ဘုရား ပရဝဏ် အတွင်း နေ့စဉ် ညနေတိုင်း အညောင်း အညာပြေ အပျော်တမ်း ခြင်းခတ် ကစားရာမှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၂-၁၂၇၃ ခုနှစ်တွင် အိမ်တော်ရာ ခြင်းဝိုင်းအဖြစ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၃-၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဖျော်ဖြေမှုမှ အားကစားသို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးပြီးနောက် မြန်မာပြည် အိုလံပစ် အားကစားအသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ကြရာ၌ အပျော်တမ်း ခြင်းလုံး အဖွဲ့ကိုလည်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်မှစ၍ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အိုလံပစ် အားကစား ပွဲတော်ကြီးတွင် ခြင်းလုံးခတ် ပြိုင်ပွဲလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှဉ်ပြိုင်သော အဖွဲ့များမှာ အင်းစိန်-ရန်ကုန်- ဥက္ကံ-ပြည်-မြင်းခြံ- မန္တလေး-ရွှေဘို ခြင်းအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက ခြင်းလုံးခတ် ပြိုင်ပွဲ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တစ်ရပ် တည်ရှိစေရန် ခြင်းလုံးဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ညီလာခံကြီး တစ်ရပ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ် ဇွန် ၃ဝ ရက်မှ ဇူလိုင် ၆ ရက် အထိ ရက်သတ္တပတ်ကြာမျှ ရန်ကုန်မြို့ အောင်ဆန်း အားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၉၅၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ကျင်းပသော အရှေ့တောင်အာရှ မိသားစု အိုလံပစ် ပွဲတော်ကို မြန်မာပြည် ခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ခြင်းယိုင်ခတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စေလွှတ် သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာတွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ခြင်းလုံးအဖွဲ့သည် ပီကင်းမြို့၌ ခြင်းခတ် ကစားပြခဲ့ သည်။
ဤသို့မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံးအားကစားနည်း တိုးတက် မြင့်မားလာမှုတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဦးဆောင် လမ်းပြခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ဦးကရင်၊ ဦကံ၊ ဦးဗိုလ်ကြီး၊ ဦးစိုးတင့်၊ ဦးအရိန်၊ ဦးအောင်ကိုး၊ ဦးဘသိန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ပီကင်းပြန် ဦးဘသိန်း ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သော မြန်မာခြင်းလုံး သမိုင်းစာအုပ် တွင် လေ့လာ သိရှိခဲ့ရ သည်။
ဤသို့ အစဉ်အလာကြီးသော မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံး အားကစားနည်းသည် ယခင် ယခင်ကတည်းက ကမ္ဘာမှ သိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်၌ ကျင်းပမည့် (၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး အားကစားနည်းကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား အသင်းများကို မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး အားကစား နည်းပညာ၊ ခတ်ကစားသည့် နည်းစနစ်များ ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်စေရေး နေပြည်တော် Gold Camp တွင် လာရောက်လေ့ကျင့်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနတို့ ပူးပေါင်းခွင့်ပြု ထားခြင်းကြောင့် အာရှနိုင်ငံများ မှ မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံးကစားနည်းကို ကျယ်ပြန့် စွာ စိတ်ဝင်စားမှု ပမာဏမြင့်မားလာကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ခြင်းလုံးနည်းပြ Mr. Atiyut Kimthong က ပြောကြားခဲ့သလို ကမ္ဘောဒီးယား ခြင်းလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့၍ စာရေးသူသည် မိမိနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူခဲ့ရပါသည်။
ရွှေရောင်လွှမ်းမည့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ခြင်းလုံးအဖွဲ့ အတွက်လည်း အပြီးသတ် လူရွေးချယ်ရေးကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်က နေပြည်တော် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ခြင်းလုံး ကစားနည်းတွင် ခြင်းသေ၊ ခြင်းရှင်ဟူ၍ နှစ်မျိုး ပိုင်းခြားထားပြီး ခြင်းသေခတ် ကစားခြင်းကို ညှပ်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်း ကစားရသောကြောင့် တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်မှုရှိ၍ အသုံးပြု ခတ်ကစားခြင်း နည်းပါးလာသည်။
ခြင်းရှင်ခတ် ကစားနည်းကို ခြင်းယိုင်ခတ် ကစားနည်း ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုသည်။ ခြင်းယိုင်ခတ်မှာ လူငါးယောက်၊ ခြောက်ယောက် ဝိုင်းဖွဲ့၍ ခြင်းလုံးမြေသို့ မကျစေဘဲ လေထဲတွင် ပျံဝဲနေအောင် စုပေါင်း ခေါင်းဆောင်မှု တစ်ဦးချင်း တာဝန်ယူမှုများဖြင့် အပေးအယူ သဘောတို့ ပါဝင်သောကြောင့် ခြင်းယိုင် ခတ် ကစားနည်းက တစ်ခေတ်ဆန်းလာသည်။
ယခင်က ခြေထောက်အပြင် ခေါင်းဖြင့်တိုက်ခြင်း၊ ပခုံးဖြင့် တော့ခြင်း၊ တံတောင်ဆစ်တို့ဖြင့်တိုက်ခြင်း၊ တံကောက်ကွေးဖြင့် ခတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသော် လည်း ယခုအခါ ခြေထောက် တစ်ခုတည်းကိုသာ လုံးလုံးလျားလျား အသုံးပြု လာကြသည်။
ခြင်းခတ်နည်းများ အနက်မှ ခြင်းယိုင်ခတ်ခြင်း ပြိုင်ခတ်တို့သည် သိပ္ပံနည်းကျကျ တီထွင်ခတ် ကစားလာကြသည်။ ယနေ့မျက်မှောက်တွင် ခြင်းခတ်ကစား နည်းကို ရိုးရာပြိုင်ပွဲများ အဖြစ်မှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 27th SEA GAMES အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ထည့်သွင်း ကျင်းပတော့မည် ဖြစ်၍ မြန်မာ့ရိုးရာ အမွေအနှစ် အစစ်အမှန်တို့ကို အာရှနိုင်ငံများ အတွင်း၌ ထုတ်ဖော်ပြခွင့် ရရှိကာ နိုင်ငံတကာတွင် မြန်မာဟေ့လို့ ဟစ်ကြွေး၍ နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ဆောင် နိုင်ကြတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း (၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း အောင်နိုင်ရေး အတွက် ဂုဏ်ပြုရေးသား လိုက်ပါသည်။ ။
Thank You ဆိုတဲ့ စကားထက် ကောင်းတဲ့ စကား ရှိရင် ပရိ သတ်ကို ပြောချင် ပါတယ် စိုင်းစိုင်း ခမ်းလှိုင်
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under အမေးအဖြေ | No comments
စိုင်းစိုင်း ခမ်းလှိုင်က ဘန်နီဖြိုး ရဲ့ လူပျို လှည့်တေး ကို သူ့ရဲ့ Franzo Production ကနေ Co-producer အနေနဲ့ ထုတ်ပေး မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဘန်နီ ဖြိုးရဲ့ လူပျို လှည့်တေး စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲ နေ့က သူက ဘန်နီ ဖြိုးကို တေးရေး၊ တေးဆို အပြင် သူ့ရဲ့ စီးရီး Cover Design တွေက အစ ကိုယ်တိုင် လုပ်တာမို့ တကယ် တော်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက် ပါလို့ သူက ချီးမွမ်း စကား ပြောခဲ့ ပါ တယ်။ တကယ်တော့ လည်းသူ ကိုယ် တိုင်က မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်၊ တေး ရေး၊ တေးဆို၊ စာရေး ဆရာ စတဲ့ အောင်မြင်မှု များစွာကို ပိုင်ဆို င်ထား နိုင်ခဲ့ သူပါ။ သူနဲ့ ခဏတာ တွေ့ဆုံ ခိုက်
Q. စိုင်းစိုင်း Franzo ကနေ တခြား အဆိုတော်တွေရဲ့ အခွေတွေ ထုတ်တဲ့ အခါ ဘာကို အဓိက ထားပြီး ထုတ်လဲ။ ခင်မင်မှု ကြောင့်လား၊ သီ ချင်း ကြောင့်လား။
A. အဓိက ကျွန်တော်ကြိုက် ရင်ထုတ် တယ်။ အကြမ်း ဖျင်းက တော့ ကျွန်တော် ကလည်း ဂီတရဲ့ ပရိသတ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ ဖန်တီး လိုက်တဲ့ သီချင်း တွေကို ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင် လည်း နား ထောင်ချင် သလို ပရိသတ် ကိုလည်း နားထောင် စေချင် တယ်။ နောက် တစ်ခုက လူငယ်တွေ တောက်လျှောက် လှမ်းတဲ့ သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်း ခံယူ ချက်မှာ ကျွန်တော် နဲ့ခံယူ ချက်ခြင်း သိပ်မ ကွဲပြား ဘူးဆိုရင် လက်တွဲဖြစ် တယ်။ ရံဖန် ရံခါမှာ တော့ တချို့အနု ပညာ ကိုတော့ ကျွန်တော် အရမ်း ကြိုက် တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံယူ ချက်က ကျွန်တော်နဲ့ သွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်း မတူဘူး ဆိုရင်တော့ အလုပ်တွဲ လုပ်ဖို့တော့ ခက် တာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ ခံယူ ချက်ခြင်း လည်းတူ၊ သွား ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်း ပုံစံလည်း တူ တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ အချိန်မှာ ကိုယ် လည်း တတ်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပူး ပေါင်းအား ထုတ်လိုက်တာ ပေါ့ဗျာ။
Q. ဘန်နီဖြိုး အခွေ ထဲက ဘယ် တော့ များမှ နီးရ မှာလဲ ဆိုတာ ဘယ် သူ့ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထား တာလဲ။
A. ဘယ်သူ့ ကိုမှ မရည် ရွယ်ပါ ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ် ကတည်း က ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဆိုဖို့ ရေး ထားတဲ့ သီချင်း ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘန်နီနဲ့ သီရိဆွေ ဆိုလိုက်တဲ့ အခါ ကျွန်တော် ဆိုတာထက် ပိုကောင်း နေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မတတ် နိုင်ပါ ဘူး။ နှမျောစွာ နဲ့ပဲ ပေးလိုက် ရပါ တယ်။
Q. သူငယ်ချင်း တွေ မင်္ဂလာ ဆောင်မှာ ဘာတွေ ကူညီပေး ဖြစ်ဦး မလဲ။
A. ဘယ်လို မှတော့ မကူ ညီပါ ဘူး။ သူတို့ ဖိတ်တဲ့ ပွဲတွေကို လိုက် စားမှာ ပေါ့ဗျာ။
Q. သတို့သား အရန် လုပ်ဦး မှာ လား။
A. သတို့သား အရန် လည်းမ လုပ် ပါဘူး။
Q. Pee Mark မင်းသမီး နဲ့ ရိုက်မယ် ဆိုတာ သေချာ ပါပြီ လား။
A. မသေချာ သေးပါ ဘူး။ ရိုက် ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစား နေကြ ပါတယ်။ ရိုက် ဖြစ်မှပဲ ကျွန်တော် အဲဒီ သတင်းကို ပြောချင် ပါတယ်။
Q. ဒီနှစ်မှာ စိုင်းစိုင်း Brand Ambassador အဖြစ် အများ ကြီးပဲ လက်ခံ ဖြစ်တယ် နော်။
A. Brand Ambassador ဆို တာက ခုခေတ်စား လာတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်း နှစ်တွေက လည်း ကျွန်တော်တို့ ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ပါ တယ်။ ဒီနှစ် မှာတော့ ကြော် ငြာရိုက်တဲ့ အခါမှာ ကြော်ငြာ မှာအ သုံးပြုတဲ့ Model ကို Brand Ambassador ဆိုတဲ့ စကားလုံး က အနည်းငယ် ဖောင်းပွ လာပါ တယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ နဂိုက တည်းက မူက တော့ များသော အားဖြင့် ကျွန်တော် တစ်နှစ် အတွင်းမှာ အမျိုး အစားတူ ကုန်ပစ္စည်း နှစ်မျိုးကို ကြော်ငြာ လေ့မ ရှိပါ ဘူး။
Q. ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကျော်ထိ အောင်မြင်မှု ထိန်းသိမ်း လာနိုင်တာ ဘာကြောင့် လို့ထ င်လဲ။
A. ဟုတ်လို့ လား။ ကျွန်တော့် ကိုယ် ကျွန်တော် တော့ မနှစ် တစ်နှစ် ကမှ တောင်ကြီးက ဆင်းလာပြီး လူ တွေ လက်ခံ လာတာလို့ နားလည်ထား တုန်းပဲ ရှိသေး တယ်။ ကျွန်တော်ရေး တဲ့သီချင်း ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေကိုတော့ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်မ တူအောင် တော့ အားထုတ် ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေ ကပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ခုန်မှု တွေဖြစ် တယ်။
Q. ဝတ္ထု ဇာတ်လမ်း ရော မရေး တော့ဘူး လား။
A. ဝတ္ထု ဇာတ်လမ်း တိုင်းရေးရ လောက်အောင် တော့ ကျွန်တော် အချိန် မဖြစ်နိုင် သေးပါဘူး။ ဝတ္ထု ရေးဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ကျွန် တော် အချိန် အများ ကြီးလို သလို skill လည်း အများ ကြီးလို ပါသေး တယ်။
Q. ဒီနှစ် တောင်ကြီး ပြန်တဲ့ Feeling ကရော
A. ဒီနှစ် တောင်ကြီး ပြန်တဲ့ Feeling ကတော့ ဘယ်နှစ် နဲ့မှ မတူ ပါဘူး။ ကျောင်းမှာ အာစရိ ယပူ ဇော်ပွဲ လုပ်တယ် ဆိုတော့ ငယ်သူ ငယ်ချင်း ဟောင်းတွေ အများ ကြီးတွေ့ ရသလို ဆရာ၊ ဆရာမ တွေလည်း အများကြီး တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့် အတွက် မမေ့ နိုင်တဲ့ အချိန်လေး ပါပဲ။
Q. ဒိတ်ဒိတ် ကြဲ VCD ဘယ် တော့လောက် ထွက်ဖြစ် မလဲ။
A. ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ကတော့ မမီ နိုင်တော့ဘူး ထင်ပါ တယ်။ ဒီဇင်ဘာ မထွက် နိုင်ရင် ဖေဖေါ်ဝါရီမှ ထွက် ဖြစ်တော့ မယ်။
Q. ဖက်ရှင်ရဲ့ Idea တွေ အမြဲ လန်းနေတာ ဘာကြောင့် လဲ။
A. ကျွန်တော် တစ်ယောက် တည်းထူး ပြီးတော့ ဆန်းသစ် အောင် တော့ ကျွန်တော် မကြိုးစား နေပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဒီကမ္ဘာ မြေမှာ နေထိုင် တဲ့ လူတစ်ယောက် ပီပီ ဒီ ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ရေစီးကြောင်း ထဲမှာ ကိုယ်အဆင် ပြေသလို လိုက်နေ ထိုင်တာပါ။ ကမ္ဘာ မှာ ဒီဖက်ရှင် ခေတ်စား လာတယ် ကိုယ်ကြိုက် တယ်ဆို ဝတ်လိုက် တာပဲ။ ကမ္ဘာမှာ ဒီဟန်ပန် မုရာခေတ် စားတယ်။ ကိုယ်လည်း အားကျ တယ်။ ကိုယ်နဲ့လည်း လိုက်တယ်ဆို အများ နည်းတူ လိုက်ပါ စီးမျော လိုက် တာပဲ။ ငါသည် ဖက်ရှင်မှာ တစ် ကမ္ဘာ လုံးနဲ့ ရှေ့ပြေး နေရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး တော့မ ရှိဘူး။ ကျွန်တော်က ကိုယ် ကိုယ်ကိုယ် ခေတ်ထဲ ကကောင် လို့ထင် တယ်။ ကျွန်တော်ခေတ်ထဲ မှာပဲ နေထိုင် တယ်။
Q. ပရိသတ်ကို ဘာတွေ ပြော ချင်သေး လဲ။
A. ဒီ ရက်ပိုင်း ကျွန် တော်တော် တော်ပင် ပန်းပါ တယ်။ ပွဲတွေ ရော၊ ရိုက်ကူး ရေးတွေ ရော၊ Seagames Reharsal တွေရောသွားရ တယ်။ နိုင်ငံ တကာ အနု ပညာရှင် တွေနဲ့ တွဲ ဖက်ဖျော် ဖြေရမှာ ဆိုတော့ ဖိစီးမှု လည်းများ တယ်။ ဖိအား လည်းများ တယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်နဲ့ ကျွန်တော် ဆို ကျွန်တော် ဒီလောက် မလုပ်နိုင် ပါဘူး။ ကျွန်တော် ညမ အိပ်ခင်ပဲ ဖြစ် ဖြစ်၊ နံနက် အိပ်ရာ ထရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Facebook က message တွေ ဖုန်းက message တွေဖတ် ပါတယ်။ အဲဒီ အခါ ပရိသတ် တွေက Sai Sai fighting ဆိုတဲ့ စာလုံး လေးတွေ ဖတ်ပြီး ဆက်သွား နေတာ ပါ။ ကျွန် တော် သိစေချင် တာက ပရိသတ် အားပေးလို့ ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင် တယ်ဆို တဲ့စကား မျိုးမ ဟုတ်ဘူး။ Thank You ဆိုတဲ့ စကား ထက်ပို တဲ့ စကားလုံး ရှိရင် ပရိသတ် ကြီးကို ပြောချင် တယ်။
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်း (Chest Pain) သည် ရင်ဘတ် အလယ် တည့်တည့် နေရာ တခု တည်း၌ အောင့်ခြင်း ကိုသာ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပဲ ရင်ဘတ် တခု လုံးသာ မက ရင်ဘတ် နှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသည့် တခြား အစိတ် အပိုင်း များ အထိ ပြန့်နှံ့ပြီး အောင့်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း အားလုံးကို ဆိုလို ပါသည်။ ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီးဆရာဝန်မှ အတိအကျ ရောဂါ ခွဲခြား သတ်မှတ် ခြင်း (Diagnosis) ကို လုပ်ပြီး မှသာ မည်သည့် ရောဂါ
အမျိုး အစား ဖြစ်သည်ကို သတ်မှတ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ သို့သော် လည်း ရင်ဘတ် အောင့်သည့် ဝေဒ နာကို မကြာ ခဏ ခံစား နေရသူ တချို့သည် ရောဂါ ကို ဆရာဝန် နှင့် ပြပြီး ရောဂါ အဖြေ မရှာပဲ မိမိ ကိုယ် မိမိ နှလုံး ရောဂါ (သို့) အစာအိမ် ရောဂါ စွဲ ကပ်နေ သည်ဟု ထင်မှတ် နေကြ ပြီး ပတ်ဝန်း ကျင်မှ အကြံ ပေးသည့် မိမိ သန်ရာ နည်းများ ဖြင့် ကုသနေ ကြသည်ကို မကြာ ခဏ ကြားသိ နေရပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ရင်ဘတ် အောင့်သည့် ဝေဒနာ ကို ခံစား နေသူ များ အားလုံး အတွက် ဗဟု သုတ လို့ငှာ Dr Warwick Carter ရေးသား သည့် Home Doctor ထဲမှ ကောင်းနိုး ရာများကို ကောက်နှုတ်၍ ပြုစု တင်ပြ လိုက်ပါ သည်။
၆။ အဆုပ် ပွခြင်း ( Pneumonia)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြီးလေးကြီး လေးပွင့်ဆိုင် ဒိုင်ယာလော့တောင်းဆိုမှုသည် သူရသူရဦးရွှေမန်း- ဒေါ်စု မဟာမိတ်အတွဲ ပြိုကွဲသွားပြီဟု အဓိပ္ပါယ် ဖော်နိုင်မည်လား။ သူရသူရဦးရွှေမန်းသည် စစ်အစိုးရတွင် နံပတ်(၃)ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈-၂၀၀၉ နိုင်ငံရေးကိစ္စများကို ကိုင်တွယ် ခဲ့သူဟု သမ္မတ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်က ဆိုပါသည်။ ၂၀၀၇ တွင် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှင့် ဖြိုခွင်းမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။ မကြာသေးခင်ကပင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးမြင့်ဆွေက သူရဦးရွှေမန်းကို သက်သေထား၍ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်သည် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ပတ်သက် လာလျှင် အမြင်စူးရှသူဖြစ်ကြောင်း၊ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများအပေါ် သူရဦးရွှေမန်းဦးစီး၍ ဆုံးဖြတ် သော နိုင်လုံဟု ခေါ်သည့်အစည်းအဝေးများတွင် ဦးခင်အောင်မြင့် အစဉ်အမြဲတက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း လည်း ဦးရဲထွဋ်က ပြောပြသည်။ ဤသည်တို့ကို ဆက်စပ်လိုက်လျှင် ထွက်ပေါ်လာသော ပုံရိပ်သည် သတိထားဖွယ်ရာကောင်းသော လွှတ်တော်ဥက္ကဌ(၂)ဦးစလုံး၏ အရိပ်များ ဖြစ်နေပါသည်။ ပထမအချက် အနေဖြင့် ဤသည်တို့ကို သိရှိသွား၍ မဟာမိတ် ၀င်ရိုးတန်း ပြိုကွဲသွားခြင်းလော စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေ ပါသည်။
ဒုတိယအချက်ကို ဆက်လက် တင်ပြလိုပါသည်။ သူရဦးရွှေမန်းသည် စစ်အစိုးရ၏ နံပတ်(၃)ခေါင်း ဆောင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏လက်ရှိခေါင်းဆောင် ဖြစ်သောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးတွင် အရေးကြီး သော လွှတ်တော်တွင်း ချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းထားနိုင်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က သူရဦးရွှေမန်း၏ အားကိုယူ၍ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ဖွယ် ရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင် ပါသည်။ ယခုအချိ်န်တွင် သူရဦးရွှေမန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်လိုသည့် အလားအလာကို ရိပ်စားမိ၍ သမ္မတ၊ တပ်ချုပ်တို့ နှင့် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံရန် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သေချာသည့်အချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် သူရဦးရွှေမန်းအား အားကိုး၍ မရနိုင်တော့ ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယုံကြည်လာသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
တတိယအချက်ကို ဆက်လက် တင်ပြလိုပါသည်။ လွှတ်တော်အတွင်း လေ့လာသုံးသပ်ရေး ၁၀၈ ဦး ကော်မတီ၏ အရိပ်အကဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရိပ်စားမိခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၁၀၈ ဦးကော်မတီက တင်ပြလာသောအချက်များတွင် ၅၉(စ) မပါနိုင်၊ သူရဦးရွှေမန်းကလည်း လွှတ်တော်ဆောင်ရွက်မှု စနစ် အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်ကို ထောက်ခံမည်၊ လွှတ်တော်တွင်း မဲခွဲလျှင် NLD ရှုံးမည်၊ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်နိုင်တော့။ သူရဦးရွှေမန်းတစ်ဦးတည်းအနေဖြင့် ၅၉(စ)ကို ပြင်ဆင် ပေးလိုပါသော်လည်း လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဤသို့ ဖြစ်နေသည်ကို တတ်နိုင်မည်မဟုတ်။ ယခု အတိုင်း အဖြေထွက်လာမည့် အနေအထားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုတင်သိရှိလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စတုတ္ထအချက်ကို ဆက်လက်တင်ပြလိုပါသည်။ သမ္မတ ဖြစ်လိုသော သူရဦးရွှေမန်းဘက်ကကြည့်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယှဉ်ပြိုင်စရာ မဟုတ်သော ပြိုင်ဘက်ကြီး ဖြစ်နေသည်။ သူရဦးရွှေမန်း သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စင်ပေါ်တက်မလာစေရန်သာ ကြိုးပမ်းရမည့် အနေ အထားမျိုး ဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စနစ်တကျ တားနိုင်ဆီးနိုင်သည်မှာ ၅၉(စ)သာ ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိကိုအလဲထိုးမည့် ထောက်လက်သီးကို သိသိကြီး ရင်ဆိုင်တိုးပါမည်လော။ စစ်တိုက် နေကြသော စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ဓလေ့စရိုက်မှာ ရည်မှန်းချက်ကို ဦးစွာသတ်မှတ်ပြီးမှ ပန်းတိုင် ရောက်ရှိရေး ဖော်ဆောင်တတ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူရဦးရွှေမန်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ သမ္မတ ဖြစ်ရေး ဟု အတိအလင်း သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ရာ ယင်းပန်းတိုင်ရရှိရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ စစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက် တရားမျှတမှုတို့ ရှိမည် မဟုတ် ဟူသော စကားပုံကိုလည်း သတိ ရဖွယ်ရာပင်။
ပဉ္စမအချက်ကို ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဆက်ဆံ ရေးမြှင့်တင်ကာ လိုလားချက်များကို ပုံဖော်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ခဲ့ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးကစားကွက် အလဟဿ ဖြစ်သွားပြီဟု သိရှိလာရခြင်းကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဘက်ကို ဦးလှည့်လိုက်ခြင်းလော စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် သူရဦးရွှေမန်းကို အားကိုး၍မရနိုင်တော့၊ လွှတ်တော်ကို အားကိုး၍မရနိုင်တော့ ဟု ဆုံးချက်လိုက်ခြင်းကတော့ သေချာနေပါသည်။ ဤသို့ ဆိုလျှင် (၂)နှစ်ခန့်အချိန်ကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အချိန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သော သူရဦးရွှေမန်း နှင့် မဟာမိတ်ဝင်ရိုးတန်းတည်ဆောက်ရေးဗျူဟာကြောင့် မည်သည့်အကျိုးအမြတ်များ ထွက်လာခဲ့ပါသနည်း။ ဤသည်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သူရဦးရွှေမန်းအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထောက်ခံမှုကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချ၍ အစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများတွင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်သည် သူရဦးရွှေမန်းဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့ပါသည်။ တစ်ဘက်သတ်ဆန်သော၊ အာဏာရှင် ဆန်လာသော လွှတ်တော်၏ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူရဦးရွှေ မန်း ဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့ပါသည်။ အမြင်သာဆုံး ဥပမာ ပြရလျှင် သူရဦးရွှေမန်း၏ သားများ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နေသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာလိုင်စင် ချထားပေးရေးကိစ္စတွင် အရေးကြီးအဆို တင်သွင်း၍ ကြားဝင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ၌ NLD ပါတီသည် သူရဦးရွှေမန်းဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး NLD အမတ် ဦးဝင်းမြင့် (ပုသိမ်)က တက်ကြွစွာ တိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့ပါသည်။ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဦးဆောင် ရမည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီ သည် အခြေခံဥပဒေခုံရုံးအား စွပ်စွဲပြစ်တင်ခဲ့ ရာတွင် သူရဦးရွှေမန်းဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြပါသည်။
မဟာမိတ်ဝင်ရိုးတန်း စိတ်ကူးဖြင့် လွှတ်တော်၏ လိုအပ်ချက်များ၊ မှားယွင်းမှုများကို တစ်စုံတစ်ရာ ထောက်ပြ ပြောကြားခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ အစိုးရအား အတိုက်အခံပြုမှုများတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ခဲ့ပါသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအား အကောင်းမမြင်ကြရန်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ပြီးမှ ၀င်ရောက်ကြရန် နိုင်ငံ တကာကို ကြိမ်ဖန်များစွာ တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး အစိုးရနာမည်ပျက်စေရန် ကန်ပိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်သားများ နိုင်ငံရေးတွင် ၀င်ရောက်ပါဝင်ခြင်း မပြုသင့်ကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ၀ါဒဖြန့်ချိခဲ့ပါ သည်။
ယခုအချိန်တွင် ၀င်ရိုးတန်း အလုပ်မဖြစ်နိုင်တော့ ဟု သိရှိလာသောအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာဆက်လုပ်ခဲ့ပါသနည်း။ သူရဦးရွှေမန်းသည် လွှတ်တော်ကို ထိန်းထားသူ ဖြစ်၍ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး တွင် အခရာကျပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူရဦးရွှေမန်းဖက်ကို ပုံအောရမည် ဟု တွေးတောခဲ့သော အတွေးအမြင်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲချော်ခဲ့ပြီ ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ တစ်ဖက်ဖက်ကို ရွေးချယ်မှု ပြုရာတွင် သူရဦးရွှေမန်း တစ်ဖက်တည်းကိုသာ ပုံအောလိုက်သော အလောင်းအစားကို မှားသည်ဟု မပြောလိုပါ။ သို့သော်လည်း ပါဝါကြီး(၂)ခုအကြား သမမျှတအောင် လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကစားရန် လိုအပ် သည်ကို သိရှိခဲ့ပါလျက် တစ်ဖက်တည်းကို ပုံအောခဲ့ခြင်း၏ ရလဒ်သည် ယခုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်း အချည်းနှီးသာ ဖြစ်နေပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တွေးခေါ်ယူဆမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု တို့သည် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် အထူးပင် အရေးကြီးပါသည်။ အများကလည်း အားကိုးတကြီး ယုံကြည်မှုကြီးစွာဖြင့် မျှော်လင့်နေခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ကြေမွစေခဲ့သော ခြေလှမ်းမှားများ လှမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသိန်းစိန်နှင့်ရော၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ပါ နီးကပ်မလာဘဲ ပို၍ပို၍ ဝေးကွာခဲ့ရခြင်း၏ တရားခံသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သာလျှင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့ ၏ အကွက်မှားရွှေ့မှုများကို ပြန်လည်ဘွာခတ်၍ မရနိုင်ပါ။ စတေးလိုက်ရသည်မှာ ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့် ချက်များအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် လွှတ်တော်က အားကိုးအားထား ပြု၍ မရနိုင်သော အချိန်လွန်ကာမှ ဦးသိန်းစိန်ထံ စာရေးတောင်းဆိုခြင်းသည် သင့်လျော်ပါ၏လော ဟု မေးခွန်း ထုတ်လိုပါသည်။ ဒိုင်ယာလော့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် ရှေးဦးစွာ နားလည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ရှိပါ သည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းရပါသည်။ ယင်းနောက် တတိယအဆင့်တွင်မှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း အမှုကို ပြုရပါသည်။ ဤအချက်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသည့် “ဟင့်အင်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း” စာအုပ်တွင် ပါရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံရေးသီအိုရီများကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် အမှတ်လျော့အောင် မလုပ်ခဲ့ဘဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်ပေးခဲ့ပါက ယခုထက်ပိုမိုသာလွန်သော စီးပွားရေးအခြေအနေတစ် ရပ်ရပ်ကို ရရှိချင် ရရှိနေပါလိမ့်မည်။ တပ်မတော်နှင့် ပိုမိုဝေးကွာစေမည့် တွန်းအားကို မသုံးခဲ့ဘဲ ဆွဲအားကို သုံးခဲ့ပါလျှင် ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို ရရှိချင် ရရှိနေပါလိမ့်မည်။ နားလည်ရခက်နေ သည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် သူရဦးရွှေမန်းဘက်ကို ပုံအော နိုင်ခဲ့သလိုမျိုး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် သမ္မတနှင့် တပ်မတော်ကို စည်းရုံးရမည် ဟု မတွေးတော နိုင်ခဲ့ပါသနည်း။ ပါဝါကြီးများအကြား ကစားနိုင်လျှင် ကစားနိုင်သလောက် အကျိုးအမြတ်ထွက်နိုင်သည့် ကြားခံပါဝါကြီး တစ်ရပ် ဟူသော ပါဝါနိုင်ငံရေးကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အရှုံးထွက်အောင် ကစားခဲ့ ပါသနည်း ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူကို ဦးဆောင်နေသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အတွက်အချက် မှား၍ မရပါ။ မှားခဲ့သော နိုင်ငံရေးကစားကွက်ကို ပြန်ပြင်၍ မရနိုင်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် မည်သူ ရှုံး၍ မည်သူနိုင်သနည်း တွက်ချက်ကြည့်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မတလည်း မရှုံးပါ၊ တပ်မတော်လည်း မရှုံးပါ။ သူရဦးရွှေမန်းလည်း မရှုံးပါ။ တစ်ကယ်တမ်း အရှုံးပြခဲ့သည်မှာ (၂)နှစ်နီးပါး အချိန်များ ရင်း၍ မည်သည့်အကျိုးအမြတ်မျှ မထွက်အောင် ဟိုလိုလိုဒီလိုလို လုပ်ခဲ့သော NLD ပါတီသာ လျှင် ဖြစ်နေပါသည်။ ဒေါ်စုနှင့် NLD ၏ ရည်မှန်းချက် ပြည့်ဝရန် မည်သည့်ပါဝါကို မည်သို့ကစားသင့်သည် ဟူသော အနိမ့်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုပင် မှန်ကန်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ကို ယခုနောက်ဆုံး လေးပွင့်ဆိုင် တောင်းဆိုချက်က သက်သေပြနေပါသည်။ ဤသို့ မှားယွင်းသော ပါဝါနိုင်ငံရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရွေးချယ်ကစားလာခဲ့စေရန် ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြသော NLD ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ အကြံ ပေးများ၊ လွှတ်တော်တွင်းရှိ ဦးဝင်းမြင့်(ပုသိမ်)ဦးဆောင်သော NLD အမတ်များ အားလုံးတွင် တာဝန် ရှိသည် ဟုသာ လက်ညိုးတည့်တည့် ထိုးလိုပါသည်။ နိုင်ငံရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးကစားကွက် အမှား အတွက် ဒီထက်မက ထိုးသင့်သည် ဟုသာ ထင်မြင်မိပါတော့သည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိုးမြတ်သူဇာ ရဲ့ရှင်းလင်းချက်
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under အနုပညာ | 1 comment
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း FB စာမျက်နာပေါ်သို့ ရောက်လာသည့်
ကျမ နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ပီး
ကျမ မိသားစု မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအပါအဝင် ကျမကို သံယောဇဉ် ရှိကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များ အားလုံးစိတ်အနှောက်အရှက် များစွာဖြစ်ရသလိုကာယကံရှင် ကျမကိုယ်တိုင်လဲအတိုင်းအဆမရှိ စိတ်ထဲမှာထိခိုက် နာကျင်ရပါတယ်။ Moe Zay Nyein ကိုကျမ မသိပါ။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုလုပ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာကိုလည်း ကျမ နားမလည်ပါ။ သူတင်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာများကို မှန်ကန်ပါတယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မထောက်ခံထားသလို လုံးဝ အမှန်လို့လဲ မယူဆသင့်ပါ။
အခြေအနေမှန်ကို သေချာမသိဘဲ ဝင်ရေးထားတဲ့ comment နှစ်ခုလောက်ကို မြင်ရတဲ့အခါ ကျမ တော်တော် ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေဟာ စည်းကမ်းမရှိ အရှက်အကြောက်မရှိ ဥပဒေ ဘောင်တွင်း တကယ် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဒီတိုင်းကြည့်မနေဘဲ ထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးခဲ့တာ လူတိုင်းလဲသိကြပါတယ်။ nobody perfect ဆိုပေမဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ကျမဟာ perfect မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ ကျမ မှာ အားနဲချက် ချို့ယွင်းချက်တွေ အများကြီးရှိသလို အမှားမရှိ အပြစ်ကင်းတဲ့ လူမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမ အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပါပြီ။လက်ရှိမိဘ တွေနဲ့ တူတူနေပြီး ကျမ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာနဲ့ လူ့ပါတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း မှာ ရိုးသားစွာ နေထိုင်ပြီး တင့်တယ်အောင် ရပ်တည်နေပါတယ် အခုကိစ္စမှာ ကျမကို မရည်ရွယ်လဲ ကျမ ဓါတ်ပုံ နဲ့ ခေါင်းစဉ်တတ် အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျမ အနေနဲ့ အင်မတန် ခံရခက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး နားလည်သည့် အသိ ဥာဏ်မျိုး မရှိတဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးကိုတော့ ကျမ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ မှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျမ နဲ့သက်ဆိုင်သော ကိစ္စ များကိုဘဲ ကျမ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ကျမ အလုပ်ကို လေးလေးစားစား လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အနိုင်မယူ ဘ်ာသူ့ကိုမှ အရူံး မပေး Win win situation ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါတယ်။ ကျမ life ကို Day by day ဖြတ်သမ်းပါတယ် ကျမ ပျော်ပျော်နေတတ်ပေမဲ့ ဘယ်တုန်းက မှ ပေါ့ပေါ့ မနေခဲ့ပါဘူး။
ကျမ life perfect မဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ကျမကြောင့် ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပျက်ဆီး ဆုံးရူံးအောင် ဆိုးဝါးတဲ့ အမှားမျိုး အပြစ်မျိုး မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီအသက်မရွယ်ထိ ဒီနေရာမှာ ကျမ ရပ်တည်ခွင့် ရနေတာ လူတိုင်းအမြင်ပါဘဲ
လိပ့်ပြာသန့်တဲ့အတွက် ကျမ ဘဝက မင်္ဂလာ ရှိပါတယ်။ MZN ရဲ့အမှန်တရားဖော်ထုတ်တဲ့ ကိစ္စက ကျမတင်မက အကြောင်းအရာ ထဲမှာနံမည်ပါတဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် ကျမရဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေ ကိုပါ အများကြီး ထိခိုက်နစ်စေပါတယ်။ မိသားစုတွေ ရှိကြတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန် အလှန်လေးစားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ဆီးစေပါတယ် သံသယ တွေနဲ့ ရင်းနှီးမူ ကို ဒုက္ခ ရောက်စေပါတယ်။ အဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိဘဲ အများအတွက် နစ်နာဆုံးရူံးမူကို ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဘယ်လောက်ဘဲ ( အမှန် ) ဖြစ်နေပါစေ နောက်ဆုံးမှာ ( အမှား ) ဖြစ်စေပါတယ်။
MZN တင်ပြချက်မှာပါတဲ့ ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံအပါအဝင် အကြောင်းအရာ အရာအားလုံးကို ကျမ လုံးဝ လက်မခံပါဘူး အစစ်မှန်ဆိုတာကိုလဲ မယုံတဲ့ အတွက် အသိအမှတ်လဲ မပြုပါဘူး။ ကျမ အတွက် အချိန်က ဘဝ ပါ။ ဘဝကို တန်ဖိုးထားသလို အချိန်ကိုလဲ ကျမ အရမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကျမရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကိုအကုန်ခံပြီး ဒီလိုပြန်ရှင်းပြရတာ ကျမကို ချစ်တဲ့ လေးစားကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ကျမ တန်ဖိုးထားထားလို့ပါ။ ကျမ အတွက် နံပါတ် တစ် ဦးစားပေး အရေးပါတဲ့ လူတွေထဲမှာ ပရိတ်သတ်များ ပါပါတယ်။ ဆက်လျှောက်ဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ ခရီးမှာ ကျမကို လက်တွဲထားမဲ့ အဖော်ကောင်း မပါပေမဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို လက်တွဲပြီး ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ ကျမ ဆက်လျှောက်ချင်ပါတယ်။
MZH က comment တစ်ခုမှာ မကြီးစိုး စဆရ လို့ သုံးနူန်းထားပါတယ်။ စစ်သားသားသမီးဖြစ်လို့ ဒီအသုံးအနူံးကို ကျမ နားလည်ပါတယ်။ ဦး MZN ရှင်။( ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ အနဲငယ် သိထားတဲ့ အတွက် ဦးတတ်ပြီး ခေါ လိုက်တာပါ )။ ဦးပြောသလို အကြောင်းအရာတွေ ချန်ထားခဲ့လို့ ဆိုပြီး မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ အတွက် ကျမ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ကျေးဇူးတင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ ဒါပေမဲ့ ဦးပြောတဲ့ အသုံးနူန်းတိုင်း ပြောရရင် ကျမ အတွက် MZN စဆရ မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အများကြီး ထပ်ရလိုက်လို့ ဒီအတွက်တော့ ဦး ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဘယ်သူ နဲ့မှ ရေရှည် အခြေ အတင် မဖြစ်ချင်တာ ကျမ ဆန္ဒ ပါ။ လူမူဆက်ဆံရေးဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍ ပါ လူမူဆက်ဆံရေး မပြေလည်ရင် တခြား ဘယ်အရာ မှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ နိုင်ငံခြားမှာနေရတဲ့ အချိန်မှာ သိခဲ့တဲ့ ဥပဒေ တစ်ခု ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဥပဒေ မှာ တူညီတဲ့ ဥပဒေ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်
အနုပညာရှင်များ (သို့) အောင်မြင်ထင်ရှား လူသိများသူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာတွေကို
(၁) ကာယကံရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက
(၂) တရားဥပဒေအရ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင် (သို့) တရားရုံးမှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက
(၃) လက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ကျုးလွန်နေသူဟု
ခိုင်လုံသော သတင်းအထောက်အထား မရှိပါက
ဘယ်တော့မှ လူအများမြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြန့်ဝေ နိုင်ခွင့် မရှိဘူး ဆိုတာပါဘဲ။
ကျမကတော့ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အနေခက် တာမျိုး မဖြစ်စေချင် သလို ဥပဒေ နဲ့ စကားပြောရတာမျိုးတွေ အထိ လဲ အလုပ်တွေ မရူပ်ချင်ပါ။
(စိုးမြတ်သူဇာ ရဲ့ Facebook အကောင့်မှကူးယူဖော်ပြသည်)
(၂၇) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းအတွက် မြန်မာတို့၏ ရွှေရောင် မျှော်လင့်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပရန် တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး၏ ရွှေရောင်မျှော်လင့် ချက်သည် ဘောလုံးရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးရရှိ ရေးပင်ဖြစ်သည်။ အခြားဆုတံဆိပ်များ မည်မျှပင် ဆွတ်ခူး ရရှိစေကာ မူ ဘောလုံး ရွှေတံဆိပ် မပါသော အောင်မြင်မှုသည် ပြည့်စုံသော အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မည့် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိသော မာဒေးကားဖလားဘောလုံး ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် နေပြီဖြစ်သည်။ (၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံ့ ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ ယူ-၂၃ ၏ အောင်မြင်မှုသည် မာဒေးကားဖလားမှ တစ်ဆင့် ဆက်လက်ကူးစက် သွားနိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ဘောလုံးအသင်းသည် မာဒေးကား ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိထားသော အသင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆု (၄)ကြိမ်နှင့် ဒုတိယဆု (၄)ကြိမ် ရရှိထားပြီး အိမ်ရှင် မလေးရှားအသင်းနှင့် ပထမဆု (၄)ကြိမ် ရရှိဖူးသော စံချိန်ကိုလည်း တင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအကြိမ်တွင် မြန်မာနှင့် မလေးရှားတို့အနက် တစ်သင်းဗိုလ်စွဲခဲ့လျှင် (၅)ကြိမ်မြောက် စံချိန်သစ်ကိုလည်း တင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးရှိနေသည်။
မာဒေးကားဖလား ဖိတ်ခေါ်ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားနေ့ အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ ဘောလုံးအသင်းသည် (၃၈)ကြိမ်မြောက် မာဒေးကားဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က နောက်ဆုံးအကြိမ် ဗိုလ်စွဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု အကြိမ်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် မြန်မာတို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်များစွာ ပြည့်နှက်နေ သည်။ ဗိုလ်စွဲနိုင်မည့် မျှော်လင့်ချက်ကလည်း အပြည့်အဝ ရှင်သန်နေသည်ဟု ဆိုရချေမည်။
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲအတွက် ယခုပြိုင်ပွဲသည် မြန်မာ ဘောလုံးအသင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာနှင့် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ဖူးသော ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာတို့ဗိုလ်စွဲရန် အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါ တိုက်ဆိုင်နေသော ကာလဖြစ်သည်။ (၅)ကြိမ်မြောက် မာဒေးကားဖလား ချန်ပီယံအဖြစ် ဆီးဂိမ်းမှာ ယုံကြည်ချက် ရှိရှိ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရလျှင် ရွှေမြန်မာများ၏ မျှော်လင့်ချက် ဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝလိမ့်မည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်းကို တောင်ကိုရီးယား နည်းပြ ပတ်ဆောင်ဟွာက နည်းပြအဖြစ် ကိုင်တွယ်ပြီး မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားများဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မာဒေးကားဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ဘောလုံး အသင်းများမှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပွဲဦးထွက် ပွဲစဉ်အဖြစ် ထိုင်းအသင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် မလေးရှား အသင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် စင်ကာပူ အသင်းဖြင့် လည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင် ရမည်ဖြစ်သည်။ မာဒေးကား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ ပုံစံမှာ လေးသင်းပတ်လည် စနစ်ဖြင့်ကစားပြီး အမှတ်အများဆုံး အသင်းနှစ်သင်းက ဗိုလ်စွဲကစားရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုဗိုလ်လုပွဲတွင် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည့် အခွင့်အရေးမှာ ပွဲစဉ်တိုင်းကို ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင် ကစားမှသာ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာဘောလုံးချစ် ပရိသတ်များ အတွက် မာဒေးကားဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပုံများကို Sky Net Sports ရုပ်သံလိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသပေးနေပြီဖြစ်သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံသို့ လိုက်ပါအားပေးခွင့် မရသော မြန်မာဘောလုံး ပရိသတ်အတွက် အားရပါးရ အော်ဟစ် အားပေးခွင့် ရရှိနေပြီဖြစ် သည်။ မြန်မာတို့ ၏ ရွှေရောင်မျှော်လင့်ချက်ကို မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းက စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်လျက်ရှိကြသည်။ အဖွင့်ပွဲစဉ်တွင် မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းနှင့် ထိုင်း ယူ-၂၃ အသင်းတို့သည် တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီဖြင့် သရေကျခဲ့သည်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် (၃၈)ကြိမ်မြောက် မာဒေးကားဖလား ဗိုလ်လုပွဲတွင် မြန်မာအသင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှား အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ရာ မိနစ် ၉ဝ ပွဲချိန်တွင် မြန်မာအသင်းက အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို ၂ ဂိုး-၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရဗိုလ်စွဲကာ (၄)ကြိမ်မြောက် မာဒေးကားဖလားကို ကိုင်မြှောက်ခွင့် ရခဲ့သော ပုံရိပ်တို့က ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာဘောလုံး ပရိသတ်တို့၏ အမြင်အာရုံမှာ စွဲထင် နေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုအကြိမ်တွင် ထိုကဲ့သို့ ပုံရိပ်မျိုးကို မြန်မာပရိသတ် အားလုံး မျှော်လင့်ရင်ခုန် နေကြရပြီ ဖြစ်သည်။ မာဒေးကား ဖလားပြိုင်ပွဲမှ အောင်မြင်မှုသည် ဆီးဂိမ်းအတွက် အားတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ဆီးဂိမ်းအတွက် ဘောလုံး ရွှေတံဆိပ် ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးသည် မာဒေးကား ပြိုင်ပွဲက အားစမ်းပွဲ၊ ကြိုတင် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပွဲ ဆိုလျှင်လည်း မှားအံ့မထင်ပေ။
မာဒေးကားဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်း အနေဖြင့် ဆုတစ်ခုခုကို ရရှိစေချင်သည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက္ခာ ပွဲတော်ကြီးဖြစ်သော ဆီးဂိမ်းတွင်လည်း ဘောလုံး ရွှေတံဆိပ် ဆုကို မျှော်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ အနှစ်နှစ် အလလက မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး မျှော်လင့်စောင့်စား ခဲ့ရသော ဆီးဂိမ်းရွှေတံဆိပ် ဘောလုံးဆု အတွက် မာဒေးကား ဖလားပြိုင်ပွဲ မှာ မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားပုံများကို အားပေးရင်း အတွေ့ အကြုံ ကောင်းများ ရယူ၍ ဆီးဂိမ်းတွင် ရွှေရရေး ဆုတောင်းနေကြမည်ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် နှစ်ပေါင်း ၄၄ နှစ်ကြာမှ တတိယအကြိမ် ပြန်လည်ကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့သော (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာဘောလုံး အသင်း ရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ သူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ရွှေရောင် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်း အောင်မြင်မှုရရှိကာ ဂုဏ်ဆောင် နိုင်ပါစေဟု ဂုဏ်ပြုရေးသား အပ်ပါသည်။
လိုင်ဇာမြို့အနီး ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို တွေ့ရစဉ်
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးကြမယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာနဲ့ တသဘောတည်း ရပ်တည်ကြမယ် စသဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေကြပေမယ့် ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စကတော့ အလှမ်းဝေးနေသေးတယ်လို့ ကချင်နှစ်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်က သုံးသပ်ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းဌာနမှ ကိုသားညွှန့်ဦး က ကချင်နှစ်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့  အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Samson Hkalam ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဆရာဆမ်ဆန် အခုလို VOA လာပြီး အခုလို မေးမြန်းချက်တွေ ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ ကျနော် အရင်ဆုံး မေးချင်တာက ဆရာတို့အနေနဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်အရေးကိစ္စကို အဓိကလုပ်နေတဲ့ ကချင်နှစ်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့က အဓိကလုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတော့ အခုအနေအထားမှာ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားတွေလည်း ပြောနေကြတယ်၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေလည်း ပြောနေတယ်။ ဒီ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးအလားအလာက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းနီးပါး ရှိတဲ့အထဲမှာ။ ကျနော်တို့ နှစ်ချင်းအသင်းတော်အဖွဲ့ဝင်တွေက ရှစ်သောင်းနီးပါး ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က အမြဲတမ်း သူတို့နဲ့ ထိတွေ့သွားလာနေတော့ သူ့ရဲ့  စိတ်နေသဘောထားတွေကို သိရှိနားလည်းပါတယ်။ အခု နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာ ကျနော် ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ယုံကြည်တာကတော့ စစ်တပ်တွေရဲ့  ရှေ့ တန်းကို အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေ၊ ပြီးရင် ဒီတပတ်အတွင်း နှစ်ရက်သုံးရက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ။ ဒါတွေက ကျနော်တို့ နေရပ်ပြန်ရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ နောက် သူတို့ကလည်း ဒီလိုအခြေအနေမှာ ပြန်ဖို့ဆိုတာ လုံးဝစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဒုက္ခသည်တွေဖက်က ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး ရှိတော့မှ သူတို့နေရပ်ကို ပြန်နိုင်မယ့် အနေအထားရှိပါသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ ကျနော်အနေနဲ့ကတော့ နှစ်ဖက်သော စစ်တပ်တွေ ရွာတွေမှာ မရှိရင်တော့ သူတို့ပြန်ဖို့၊ လုံခြုံမှု သူတို့ရရှိမယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုတော့ စစ်တပ်တွေ ရှိနေသရွေ့ တော့ တချိန်ချိန်မှာ တဖတ်ဖတ်က လာတိုက်မယ်ဆိုတာကို သိနေတယ်ဆိုတော့ ဒါက သူတို့အတွက် လုံခြုံမှုကို လျော့နည်းစေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နှစ်ဖက်သောတပ်တွေ ဆုတ်သွားမှပဲ သူတို့ရပ်ရွာ၊ နေရပ်ဒေသကို လုံလုံခြုံခြုံ ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့ အဲဒီလို ယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အဲဒါကရော ဖြစ်နိုင်တယ့် အလားအလာ ရှိသလား။ အခုက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဆင့်ပဲ ဆွေးနွေးနေကြတာ။
Samson Hkalam ။ ။ ဟုတ်တယ်။ အဲဒါ ကျနော်အနေနဲ့ ဒီ process ကတော့ နည်းနည်းကြာမယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဆွေးနွေးမှုတွေကလည်း တော်တော့်ကိုကြာနေပြီ။ အခုကျနော်တို့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ လူထုတွေကလည်း (၂) နှစ်ကျော်ရှိပြီဆိုတော့ လူမှုဒုက္ခပြဿနာတွေလည်း အများကြီးခံစားနေရတယ်။ အများကြီး ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တဖတ်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း တပ်မတော်ရဲ့  ထိုးစစ်ကလည်း နေ့တိုင်းလိုလို သွားနေတယ်ဆိုတော့ ကေအိုင်အေဖက်ကလည်း ခံစစ်ဆိုပြီး သူတို့နယ်မြေကို ကျော်လာတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတော့ ကြားမှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေက ဒီနေရာမှာ ဒုက္ခတွေရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလို စစ်ရဲ့  အနိဌာရုံ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမှပဲ ဒီလူတွေက မိမိရဲ့  နေရပ်ဒေသကို စိတ်ချလုံခြုံစွာနဲ့ ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အခုလတ်တလော စစ်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ ဒေသခံရွာသူရွာသား ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ ငါးရာပတ်ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ မုန်းတင်ပါရွာကနေ ဗန်းမော်ဖက်ကို ထွက်ပြေးလာကြပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အခု မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကြောင့်ပေါ့။
Samson Hkalam ။ ။ နှစ်ရက်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အားလုံး ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ တစ်သိန်းကျော်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဒါက ပြည်တွင်းမှာ၊ ပြည်ပမှာ ဘယ်လိုရှိသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ အခု (၂) နှစ်အတောအတွင်းမှာ ပြည်တွင်းမှာပဲ။ ပြည်ပ - မလေးရှားဖက်ရောက်နေတဲ့ လူတွေမပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ အစိုးရ control ဧရိယာနဲ့ နယ်စပ်ဒေသမှာ ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဒီ ဒုက္ခသည်တွေ အကူအညီကို ဘယ်ဖက်က အဓိက ထောက်ပံ့ပေးနေသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ အဓိကတော့ UN အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ UN Ocha, UNICEF တို့ UNHCR တို့က အဓိက funding တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ Japn Nippon Foundation တို့၊ နောက်ပြီးတော့ British အစိုးရကပေးတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ US Government က ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကလည်း အခုနပြောသလိုပဲ UN, INGO တွေက ကျနော်တို့ဆီလာပြီး ဒီပိုက်ဆံတွေကို manage လုပ်ပြီး ထောက်ပံ့နေတာကို ခံစားရပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းကတော့ ကုလသမဂ္ဂကနေ သူတို့အကူအညီတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အသံမျိုးတွေ ကြားရပါတယ်။ အခု အနေအထားမှာကော တကယ်တမ်း အကူအညီတွေပေးတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲမျိုးတွေ ကြုံရပါသေးသလား။
Samson Hkalam ။ ။ အရင် (၂) နှစ် ဟိုဘက် ၂၀၁၂ အထိတော့ UN ရဲ့  အထောက်အပံ့မှုက တကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ပဲ သူတို့သွားလို့ရတယ်။ အဲဒါလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ။ ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၁၃ ဒီဖက်ရောက်လာချိန်မှာတော့ (၃) ခေါက်၊ (၄) ခေါက်လောက် ရှိပါပြီ။ UN C onvoy တွေ သွားပြီးမှ ထောက်ပံ့မှုပစ္စည်းတွေ ပေးနေတာ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သူတို့ သွားနေကြပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ နှစ်ဖက်လုံးက ကချင် နဲ့ မြန်မာအစိုးရဖက်က ခွင့်ပြုလား။
Samson Hkalam ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ တခြား လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ သွားပြီးတော့ ကူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကော အနှောက်အယှက်ရှိလား။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်ရဲ့ လား။
Samson Hkalam ။ ။ အခု နယ်စပ်ဒေသမှာနဲ့ အစိုးရ control ဒေသမှာကြတော့ ဒီလောက်မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒုက္ခသည်အုပ်စုတခုက တောမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရှိတယ်။ တောမှာဆိုတာက ဂျဖွေးရဲ့  ဟိုဖက်ကမ်း၊ ဆမ်နော်တို့ တောတောင်ထဲမှာ။ ဒီဖက်လည်း မထွက်ရဲ၊ တရုတ်ပြည်နယ်စပ်လည်း ဝေးဆိုတော့။ တောမှာပဲ နေတဲ့အဖွဲ့။ အဲဒီမှာ တဖွဲ့ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ မီးရထားလမ်းကြားမှာရှိတဲ့ ကော်ကွေးပါဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း နှစ်ထောင်နီးပါးရှိတယ်။ ဂျဖွေးရဲ့  ဟိုဖက်ကမ်းမှာ တစ်ထောင်နီးပါးရှိတယ်။ အဲဒီလို ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို သွားပို့တဲ့နေရာတွေမှာတော့ ခက်ခဲမှုတွေရှိပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့  ထောက်ခံစာတွေ၊ အစိုးရရဲ့  ထောက်ခံစာတွေကို အဆင့်ဆင့်ယူရပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အဲဒါက ဘယ်သူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒေသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ အဲဒါက ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ကေအိုင်အေ က အဲဒါကို အကူအညီပေးလား။
Samson Hkalam ။ ။ ကေအိုင်အေ က သူတို့နဲ့ အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ သူတို့ကတော့ သိပ်ပြဿနာ မရှိဘူး။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ နောက်တခုက အကူအညီတွေ ပေးတဲ့နေရာမှာ အခုက မြန်မာနိုင်ငံကပဲ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကလည်း မြန်မာနိုင်ငံဖက်ကပဲ သွားနေတာပေါ့။ တရုတ်နိုင်ငံဖက်ခြမ်းက တခြားကချင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေဖြစ်ဖြစ်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဖြစ် အကူအညီပေးတာ ရှိသလား။
Samson Hkalam ။ ။ ယူနန်မှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ ကချင်အမျိုးသားတွေရဲ့  ထောက်ပံ့မှုတွေကတော့ အများကြီးရရှိပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရကတော့ ကူညီတယ်ဆိုတာတော့ မကြားမိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်မှာရှိတဲ့ ယူနန် province ဖက်မှာရှိတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ အနီးစပ်နေတော့ သူတို့ဖက်က ကူညီမှုတွေကတော့ စစ်စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အတော်များများ သူတို့ကူညီမှုကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီလို အသက်ရှင်နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ တရုတ်အစိုးရ ဒီဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုသဘောထား ရှိသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ သူတို့ မကြိုက်ဘူး။ သူတို့မကြိုက်တော့ ၂၀၁၁ မှာ မူဆယ်၊ နမ့်ခန်နားက စစ်ဒုက္ခသည်စခန်းက လူ (၅) ထောင်ကျော်ကို ဗမာပြည်ဖက်ကို မောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ အခုလည်း မှတ်တိုင်အမှတ် (၆) မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို သူတို့က ဗမာပြည်ဖက်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ force လုပ်နေပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့ IDP camp မှာလည်း လေးရာကျော်၊ ငါးရာလောက် ရှိတယ်။ အဲဒီ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကလည်း ဗမာပြည်ဖက်ကို ရွှေ့ ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သိရတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အဲဒီတော့ တရုတ်ဖက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လတ်တလော ဘယ်သူက အကူအညီပေးသလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ ကျနော်တို့ local NGO တွေ အကူအညီပေးပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ Local NGO ဆိုတာ တရုတ်ဖက်က NGO လား။ ဒီဖက်ကလား။
Samson Hkalam ။ ။ မဟုတ်ဘူး။ ဗမာပြည်ဖက်က NGO တွေ၊ ဥပမာ KBC, KMSS Catholics Based လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ နောက်ပြီးမှ မေတ္တာ၊ Shalom တို့ Local NGO တွေက နယ်စပ်နဲ့ တရုတ်ပြည်ဖက်မှာ ကျန်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ပံ့ပိုးနေပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ သွားပြီးတော့ အကူအညီပေးခွင့်တော့ ရတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး တရုတ်ဖက်က ခွင့်ပြုပါသလား။
Samson Hkalam ။ ။ အဲဒါကြတော့ တရားဝင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ သွားပြီးမှ အဲဒီနေရာတွေကို သွားရပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အခု ကချင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကေအိုင်အို ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်း လုပ်နေပါတယ်။ အဓိကတော့ ကေအိုင်အိုနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကြားမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးနေတာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်း ရှိနေပါပြီ။ ဆွေးနွေးနေပြီဆိုတော့ ဒီ ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ၊ ကချင်အရပ်သားဒုက္ခသည်တွေက ဘယ်လောက်အထိ မျှော်မှန်းချက်ရှိသလဲ။ သူတို့နေရပ် ပြန်ရေး၊ သူတို့ဘဝ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေအတွက်။
Samson Hkalam ။ ။ ကျနော်တို့ ပြည်သူဖက်ကနေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မျှော်လင့်ချက်တော့ ရှိတယ်လို့ ကျနော် မမြင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ သိနေတဲ့ကိစ္စက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ သိမြင်နေကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစိုးရက မြန်မာအစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေး ceasefire ကို အရင်လုပ်ရမယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုက နောက်ကနေသွားရမယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုသွားတယ်။ ကေအိုင်အေ ကတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပြီးမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးက သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုသွားတယ်။ ပန်းတိုင်နှစ်ခုက ဆုံဖို့ခက်တယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ကမြင်တော့ ဒီလို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ၊ သိပ်ပြီးတော့ မျှော်လင့်ချက် အားနည်းတာပေါ့။ အဲဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေတာကို ကျနော်တို့ သိနေတော့ အဲဒီလို ခံစားရတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဒီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ သူတို့ ဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကော ဆွေးနွေးကြရဲ့ လား။
Samson Hkalam ။ ။ ပါတယ်။ ဥပမာ ဒုက္ခသည်ကိစ္စကို နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆောင်ရွက်သွားရန်ဆိုတာပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး အောက်တိုဘာလမှာတွေ့တယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ရွာလေးရွာကို စံပြအနေနဲ့ထားပြီးမှ ပြန်ပို့ရေးဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက အဲဒီမှာသွားမယ့်လူတွေက ရှိမယ်လို့မထင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုလို စစ်ဖြစ်နေတယ်။ ပြန်ဖြစ်တယ်။ ပြန်ပြေးတယ်ဆိုတာ ကြားနေရတော့ ကြောက်စိတ်တွေက တော်တော်နဲ့ ကုန်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ သူတို့အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ ကေအိုင်အိုကဖြစ်စေ၊ မြန်မာအာဏာပိုင်များကဖြစ်စေ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကို လာပြီးတော့ မေးမြန်းတာ၊ ညှိနှိုင်းတာ၊ ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ ဆရာတို့လို အဖွဲ့အစည်းတွေကို ညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေ လုပ်ပါသလား။
Samson Hkalam ။ ။ မရှိပါဘူး။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ သူတို့ဖက်က ဘာမှ မဆွေးနွေးဘူးလား။
Samson Hkalam ။ ။ မဆွေးနွေးပါဘူး။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ကျနော် နောက်ဆုံးတခု မေးချင်တာက ကေအိုင်အို က ကမကထလုပ်ပြီးတော့ လိုင်းဇာမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ညီလာခံလုပ်ကြတယ်။ ဒီ ညီလာခံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကချင်ဒုက္ခသည်အရေး လုပ်နေတဲ့ ဆရာတို့အနေနဲ့၊ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။
Samson Hkalam ။ ။ လိုင်းဇာမှာ လုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကတော့ တိုင်းရင်းသားများအတွက်တော့ အခွင့်အရေးတခု အောင်မြင်မှုလမ်းစတခုလို့ မြင်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့။ အဲဒီကနေ ထွက်လာမယ့် အဖြေကတော့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ နောက်ပြီးမှ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ အဖြေထွက်လာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အားလုံးမျှော်လင့်တာကတော့ လိုင်းဇာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့  ဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်၊ အနာဂတ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းသော၊ တရားမျှတာသော ပြည်ထောင်စုဖယ်ဒရယ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်တော့ ပထမခြေလှမ်းလို့ ပြည်သူတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေဖက်က ဒါတွေကို မြင်ပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Samson Hkalam ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရာသီခွင် အလိုက် လိုက်ဖက်ညီ အဆောင်ပန်းလေးများ
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ပန်းပေးတာ နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပန်း ဆိုတာ ဟာ အချစ်ရဲ့ သင်္ကေတလို့ အစဉ်အဆက် လက်ခံ ထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းပေးတာဟာ တစ်ဖက်သား ကို အရှုံးပေး တဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တာ ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းမှု ရဲ့သင်္ကေတ သဘော ဆောင် နေပါတယ်။ ပန်းမကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုတာ လည်း မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ အမျိုးသမီး မှတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ အမျိုးသားတွေက လည်း အမျိုးသမီးလောက် နီးနီး ပန်းကြိုက်တတ် ကြပါတယ်။ ထောင်၊ သောင်း၊ သန်း မကသော ပန်းမျိုးစုတွေ၊ ပန်းမျိုး စိတ်တွေ ထဲမှာ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင် (Zodiac Sign) အလိုက် ကိုယ့်ရဲ့မွေးလနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ ၁၂ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အဆောင် ပန်းလေးတွေ ကို တစ်သက်တာ မှာ တစ်မင်္ဂလာ အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြီး သတ်မှတ် ကျင်းပတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး ရဲ့ ပန်း အလှဆင်ခြင်း မှာ ထည့် သွင်း ပေးသွား မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အခါ ဆောင်ထားမယ် ဆိုရင် သီးသန့် ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကြည်နူးအောင် ပန်းထိုးမယ်၊ ပန်း အလှဆင်မယ် ဆိုရင်တော့ ရာသီခွင် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရဲ့ ကူညီ ပံ့ပိုးမှုတွေ ကြောင့် ပိုပြီး အဆင်ပြေမှုကို တွေ့ရှိရမယ် လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခု စက်တင်ဘာလ ထဲက ရာသီခွင် နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကန်နဲ့ တူရာသီဖွားက နေ စပြီး ကြည့်ရအောင်ပါ။
(သြဂုတ် ၂၃ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်)
ကန်ရာသီဖွား များ ရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပုံဖော်ပြရရင်တော့ ကန်ရာသီဖွား များဟာ စည်းကမ်း ရှိသူ၊ အချိန်တိကျမှု ရှိသူတွေဖြစ်ကြပြီး ချစ်ရေး စိတ်ခံစားမှု ကတော့ စိတ်နှလုံး နူးညံ့ သိမ်မွေ့ကာ ချစ်သူ အပေါ် နားလည်မှုပေးနိုင် သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအနေနဲ့ နက္ခတ် ဗေဒင် ပညာကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ Virgo ဆိုတဲ့ သူ့ဂြိုဟ်ခွင် သင်္ကေတ အပျိုစင် ရုပ် အတိုင်း နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ကန်ရာသီဖွားတွေ ရဲ့ အဆောင် ပန်းကတော့ ကျူးလစ်ပန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးလစ်ပန်း ဟာ မြန် မာပြည် မှာတော့ မရှိသေး ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီး နဲ့ တစ်ပြေးညီ တိုးတက်နေတဲ့ ယနေ့အခါ မှာတော့ ကျူးလစ်ပန်း ကို မှာယူလို့ ရနေပါပြီ။ ဒါအပြင် ပန်းအတုလေးတွေ နဲ့လည်း အစားထိုး လို့ရပါတယ်။
(စက်တင်ဘာ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်)
တူရာသီရဲ့ သင်္ကေတ ရုပ်ကတော့ ချိန်ခွင်ပဲ ဖြစ်ပြီး တူရာသီ ဖွားတွေဟာ တရား မျှတမှုကို အထူး လိုလားတဲ့သူတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်း စိတ်အေးချမ်းမှု ရှိအောင် အမြဲ ကြိုးစားနေထိုင် သူ တူရာသီဖွား များဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ တရား အပေါ်မှာ လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူဟာ အတွေး အခေါ် ပိုင်းမှာလည်း ရိုးရှင်းစွာ တွေးခေါ်နိုင်သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရေး စိတ်ခံစားမှု အပိုင်း မှာလည်း စိတ် နှလုံးနူးညံ့ သိမ်မွေ့ပြီး ချစ်ခင် ဖွယ် ပြုမူ တတ်သူ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ အနေနဲ့ သူတို့ ရာသီခွ င်စရိုက် နဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ အဆောင်ပန်း အနေ နဲ့ နှင်းဆီပန်းကို ဆောင်သင့်ပါတယ်။
နှင်းဆီဟာ မြန်မာပြည် မှာလည်း ပေါများစွာ တွေ့နိုင်သလို ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံးက ချစ်ခြင်း သင်္ကေတပြပန်း အဖြစ် သတ်မှတ် ယုံကြည် ကြတဲ့ ပန်းလည်း jဖစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တူရာသီဖွား တို့ အနေ နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်၊ မွေးနေ့ အထိမ်း အမှတ် ပွဲ စတာတွေမှာ နှင်းဆီနဲ့ ထုံမွှမ်းပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပေး ပါရစေနော်။
(အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်)
ဗြိစ္ဆာ ရာသီဖွား များဟာ လျှို့ဝှက် သိုသိပ်စွာ နေတတ် သူများဖြစ် ကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံ များမှာ တော့ ရှေ့ဖြစ်မယ့် အနာ ဂတ် များကို ကြိုတင် သိစိတ်များ ရနေတတ် သူတွေပါ။ ဗြိစ္ဆာ ရာသီဖွား များရဲ့ ချစ်စိတ်ရေးရာ ခံစားမှု ကတော့ လက်တွေ့ သိပ် မဆန်ဘဲ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်နေတတ်ပါတယ်။ အချို့သော အခါတွေ၊ အရာတွေ အပေါ် မှာ လျှို့ဝှက် သိုသိပ်တတ်သူ ဗြိစ္ဆာ ရာသီဖွားတွေ ဟာ အချစ်ရေး မှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှား လွယ်ပြီး ခံစား ချက်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုထူးခြားတဲ့ စိတ်သဘာဝ ရှိတဲ့ ဗြိစ္ဆာ ရာသီ ဖွားတွေရဲ့ အဆောင်ပန်းက အခြား ရာသီခွင်တွေ ရဲ့ အဆောင်ပန်း နဲ့ မတူပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အဆောင် ပန်း ကတော့ အပူပိုင်း ဒေသများ မှာပေါက်တဲ့ ရှားစောင်းပင် အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှားစောင်းပင် များကို အဆောင် ထားရတာ နည်း နည်းတော့ ခေါင်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း လျှို့ဝှက် သိုသိပ်သလို ကြိုတင် သိစိတ်ရှိနေသူ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား များကတော့ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်နိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
(နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်)
ဓနု ရာသီဖွားတွေ ကတော့ ဘယ် အရာကို မဆို အကောင်းမြင် ပေးစိတ် များပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘယ် ကိစ္စကို မဆို စွန့်စား ရတာကိုလည်း ဓနုရာသီ ဖွားတွေဟာ နှစ်သက် တတ်ပါတယ်။ အချစ် ကိစ္စ နဲ့ ပတ် သက် ရင်တော့ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်မှု များပြားသလို လျှို့ဝှက် အချစ် ဇာတ်လမ်းတွေ လည်း ရှိတတ်ပါ တယ်။
ဓနု ရာသီဖွားတွေ ရဲ့ပန်း ကတော့ ကြက်တူ ရွေးပန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် စုံပြီး တောက်ပသလို အမြင် အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ကြက်တူ ရွေးပန်းဟာ အခိုင် ပုံစံ ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်ကိုင်ပန်း မှာ ထည့် သွင်းတာ၊ နံရံများမှာ ချိတ်ဆွဲ အလှဆင်တာ စသဖြင့် လှပစွာ ဆင်ပြင်လို့ ရပါတယ်။
(ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်)
မကာရ ရာသီဖွားတွေ ဟာ ကရုဏာစိတ် ကြီးမားသူ ဖြစ်သလို ဦးနှောက် မှတ်ဥာဏ် စွမ်းရည် မြင့်မားသူပါ။ ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက် လာရင် စီမံ ခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည် မြင့်မားတဲ့ မကာရ ဖွားတွေဟာ အနည်းငယ်တော့ ရှေးရိုးဆန်ကြ သူများ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ချစ်စိတ် ခံစားမှု အနေ နဲ့လည်း ရှေးရိုးဆန်တဲ့ သူ့စရိုက် နဲ့ ကိုက်ညီစွာ ချစ်သူကို လေးစား ချစ်ခင် ကြင်နာ တတ်သူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ရှေးရိုး ဆန်ဆန် နေတတ်တဲ့ မကာရတို့ရဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ ဂန္ဓမာပန်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္ဓမာဟာ အခမ်း အနား နဲ့ ခွဲမရတဲ့ ပန်း အမျိုးအစား ထဲမှာ ပါဝင်နေတာ မို့ အရောင်စုံ ရှိသလို ဘယ်ပန်း၊ ဘယ် အရွက် နဲ့မဆို လိုက်ဖက် ညီ တင့်တယ်တာမို့ မကာရတို့ အတွက် အလှပဆုံး ပန်းအလှဆင်ခြင်း ကို ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
(ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)
ကုံရာသီဖွား တွေဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလှကို နှစ်သက်ပြီး မြေကြီး နဲ့ နီးကပ်စွာ သဘာဝ ကျကျ အပိုအလို ဟန် မလုပ်ဘဲ နေတတ်သူပါ။ အများ အပေါ်မှာ လည်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ပြီး သဘောထား ကြီး သူတွေ ဖြစ်ကြပါ တယ်။ ဖြတ်ထိုး ဥာဏ် ကောင်းသလို သစ္စာ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် အမြဲတမ်း စာရင်းဝင်တဲ့ ကုံရာသီ ဖွား တွေ ရဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ သစ်ခွပန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ခွပန်းဟာ မြန်မာ အမျိုးသမီးတို့ အကြိုက်ဆုံး ပန်းတွေထဲက တစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် ကုံရာသီဖွားတွေ အနေနဲ့ အခြား ရာသီဖွားတွေ လောက် ပန်းက ရှာရ မခက် ပါဘူး။ သစ်ခွဟာ မင်္ဂလာ အခမ်း အနားတွေမှာ နေရာ အယူဆုံး ပန်း ဖြစ်နေတာမို့ ပန်း အလှ ဆင်ယင်သူတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အမျိုးစုံ ပြင်ဆင်လို့ ရသလို အရေးကြီး တဲ့ ကိစ္စ တွေ အတွက် အဆောင် အနေ နဲ့ ရင်ကပ်ပန်း လိုမျိုး အင်္ကျီမှာ ထိုးထားတာ၊ ခေါင်းမှာ ပန်တာ စသဖြင့် ပြင်ဆင်သွားလို့ ရပါ တယ်။
(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ မတ် ၂ဝ ရက်)
မိန် ရာသီဖွားတွေ ဟာ စိတ်ကူး စွမ်းအား ကောင်းကြ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ရဲ့ စိတ်နေ သဘောထား ကို အများက အလွယ် တကူ ခန့်မှန်းလို့ မရသလို သူ့ရဲ့ ချစ်စိတ် ခံစားမှု ကလည်း တိမ်တွေလိုပဲ မတည်မြဲ တတ်ပါဘူး။ လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ် မှု များ ပြည့်နှက်နေ တဲ့ မိန်ရာသီဖွား တွေဟာ အဆောင်ပန်း အနေ နဲ့ ကာနေးရှင်း ပန်း (မြန်မာ အခေါ် ဇော်မွှားပန်း) ကို ဆောင် ထားသင့် ပါတယ်။
ဇော်မွှားပန်းဟာ ရှာရခက်တဲ့ အမျိုးအစားထဲ မှာ မပါသလို အနံ့လည်း ခပ်သင်းသင်း ရှိတာ ကြောင့် ပန်းစိုက်အိုးတွေ နဲ့ အလှဆင် လို့ကောင်း တဲ့ ပန်းဖြစ်တာကြောင့် မိန်ရာသီဖွား တို့အတွက် မခက်ခဲတဲ့ အဆောင်ပန်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(မတ် ၂၁ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၂ဝ ရက်)
မိဿ ရာသီ ဖွားတွေ ဟာ မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင်စိတ် ရှိတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဿရာသီ ဖွားတွေ အတော် များများ ဟာ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် လူ အများကြား ထင်ပေါ် သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မိဿ ရာသီဖွားတွေ ဟာ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုး တတ်သူ၊ ဘာသာ တရား ကိုင်းရှိုင်းသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မိဿ ရာသီဖွားတွေ ဟာ ဆွတ်ပျံ့ ဖွယ် အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ကို ဖန်တီးတတ် သူတွေ ချည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ရဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ နှင်းပန်း (သို့) မိုးကုပ်လီလီ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
လီလီပန်း ဟာ စကားပန်း အနံ့ နဲ့ တူပြီး သူ့အနံ့က မွှေးပျံ့ပါတယ်။ အရောင် ကလည်း အဖြူရောင် ဖြစ်တာကြောင့် ကမ္ဘာမှာ အခမ်း အနား၊ မင်္ဂလာပွဲတွေ မှာ နှင်းပန်း (သို့) လီလီ ကို မင်္ဂလာပန်း အဖြစ် ရည်ရွယ်ပြီး အသုံးပြု လာတာ နှစ်ပေါင်း အတော် ကြာနေပါပြီ။ အချို့ က ဘိသိတ်ပန်း တစ်နည်း လက်ထပ်ပန်း လို့ခေါ်ကြ တဲ့ လီလီ ပန်းလောက် မကြီးတဲ့ အဖြူရောင် ပန်း ပွင့် တွေ ဟာလည်း လီလီပန်း အမျိုးအစား ထဲမှာ ပါပါ တယ်။
(ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့မှ မေလ ၂၁ ရက်)
ပြိဿ ရာသီဖွားတွေ ဟာ ရာသီခွင် အားလုံး ထဲမှာ မှတ်ဥာဏ် စွမ်းရည် အထူး ကောင်းမွန်ဆုံး သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟ စနစ်ကို လေး စား စောင့်ရှောက် သူတွေ ဖြစ်ကြပြီး စိတ်ရှည်တဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ချစ်စိတ် ရေးရာ အနေ နဲ့ ချစ်ခင်လွယ်၊ စောင့်ရှောက် လွယ်တဲ့ စိတ်နှလုံး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပြီး အချစ်ရေး မှာ သစ္စာ ရှိတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြိဿ ရာသီ ဖွားတွေရဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ တရုတ်စံကား ပန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် စံကားပန်းဟာ အဖြူ နဲ့ အနီမျိုးပဲ မြန်မာပြည် မှာတွေ့ရ များပါတယ်။ အနီရောင် ထက် အဖြူရောင် တရုတ်စံကားပန်း ကို ကမ်းခြေ မှာ ပြုလုပ်တဲ့ Beach Wedding မှာ အသုံးပြု ကြတာ များပါတယ်။ အင်ဒို၊ ဘာလီ၊ မလေး စတဲ့ နိုင်ငံ များမှာ စံကားပန်း ဟာ Spa များ၊ အလှ ဖျော်ဖြေပွဲများ အပြင် မင်္ဂလာပွဲ များမှာပါ အသုံး များဆုံး ပန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပဲ ထိုးထိုး၊ ပန်းပွင့် တွေကို ကြိုး နဲ့ သီကာ နံရံတွေ၊ တိုင်တွေမှာ ချိတ်ဆွဲ အလှ ဆင်တာ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ပြင်ဆင် လို့ ရတာကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ချစ်မြတ်နိုး တဲ့ ပြိဿ ရာသီဖွား တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လို့ ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
(မေလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့)
မေထုန် ရာသီဖွား တွေ ဟာ စိတ်နှလုံး ပွင့်လင်းသူ ဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစား လွယ်ကြ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲ လှုပ်ရှား နေတဲ့ မေထုန် ရာသီ ဖွား တွေဟာ စိတ် လှုပ်ရှားဖွယ် အပြည့် ရှိတဲ့ အချစ်ရေး ကို မျှော်လင့် နေကြ သူများ ဖြစ်ကြပြီး ရင်ထဲက နှစ်ပြီး မချစ်တတ် သူတွေ လည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီ မေထုန် ရာသီဖွားတွေ ရဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ ထားဝယ် မှိုင်းပန်း တစ်နည်း သင်္ကြန်ပန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ထားဝယ် မှိုင်းပန်းဟာ ဆေးဖက်ဝင် အာနိသင် အပြည့်ရှိသလို မွှေးရနံ့ရော၊ အရောင်အဆင်း ကပါ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ပန်းပါ။ သူ့ရဲ့ နာမည် က တကယ့် ကို မြန်မာ ဆန်ပါတယ်။ Rangoon Creeper လို့ သူ့ကို ခေါ်ပါတယ်။ ဧပြီလ ရောက် ရင် လှိုင်လှိုင် ပွင့်တာ မို့ သင်္ကြန်ပန်း လို့ အချို့က ခေါ်ကြ ပါသေးတယ်။ ခြံစည်းရိုးမှာ စိုက် တဲ့ နွယ်ပင် အမျိုးအစား ဖြစ်တာကြောင့် မေထုန် တို့ အနေနဲ့ ရှာရ မခက်နိုင်ပါဘူး။
(ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့)
အလွယ်တကူ မချစ်တတ်သူ၊ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်သူ၊ သစ္စာရှိသူ၊ သူတစ်ပါး မပျော်ရွှင် ချိန် စိတ် ချမ်းမြေ့အောင် လုပ်ပေးတတ်သူ ကရကဋ် ရာသီဖွားတွေ ရဲ့ အဆောင် ပန်း ကတော့ ကြာပန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ နဲ့ ကြာဟာ ခွဲမရပါဘူး။ ကြာမျိုး ငါးပါး ရှိတဲ့အတွက် ကရကဋ်တွေ အဖို့ ကြာပန်းဟာ အဆင်ပြေစွာ နဲ့ ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ ပန်းဖြစ် မှာ အသေအချာပါပဲ။
(ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့)
အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင် စွာ နေတတ်သူ၊ သဘာဝ တရားကြီး ကို ချစ်ခင် နှစ်သက်သူ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နေထိုင် တတ်လွန်း တာကြောင့် ပေါ့ ပျက်ပျက် လို့ တစ်ခါ တစ်ရံ သတ်မှတ် ခံရတဲ့ သိဟ်တွေရဲ့ အဆောင်ပန်း ကတော့ နေကြာပန်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သိဟ်တွေရဲ့ အဆောင်ပန်း က အရွယ် အစား ကြီးမား လွန်းပေမယ့် ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ သိဟ်က ဒါကို အဆင်ပြေစွာ ဖြေရှင်းပြီး လှပအောင် ဆင်ယင်နိုင်မှာပါ။
လူသားတွေ ဟာ မွေးလာချိန် က စပြီး ကိုယ့် မွေးဂြိုဟ်ရဲ့ စိုးမိုးမှု စွမ်းအား ၅ဝ၊ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားမှု ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ဘဝကို တည်ဆောက်ကြ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် ရဲ့ ကောင်းတဲ့ စရိုက်တွေ ပိုပြီး တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် မွေးဂြိုဟ် က ဖော်ညွှန်း တဲ့ ရာသီခွင် အလိုက် ဆောင်ထား ရမယ့် ပန်းလေးတွေ ကို ဆောင် ထား ခြင်းနဲ့ ပြုပြင်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘဝ ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ တစ်သက်တာမှာ တစ်မင်္ဂလာ ပဲ ရှိမယ့် မင်္ဂလာပွဲလေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အဆောင် ပန်းလေးတွေ နဲ့ လိုအပ် တဲ့ နေရာ ကို အလှဆင် လိုက်မယ် ဆိုရင် မင်္ဂလာ အရှိဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သွားမှာ အသေအချာ ပါပဲလို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒါယူ (Da You)
Ref : Bride Magazine
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ | No comments
(ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ထုတ် မဇ္ဈိမသတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်)
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ “ခွဲခြား နှိမ်ချ ကင်းစင်ဝေး ကူးစက်သေဆုံး မရှိရေး ART ဖြင့် ကုသပေး” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဆောင်ပုဒ်ကို အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမည်ဆိုပါက အကြောင်းအရာနှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။
ပထမအကြောင်းအရာအဖြစ် HIV/AIDS ဖြင့် အသက်ရှင် နေထိုင်သူများကို ခွဲခြားမှု၊ နှိမ်ချဆက်ဆံမှုတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ရန် ဆိုထားသည်။ ဒုတိယအကြောင်းအရာမှာ သေဆုံးလျော့ပါးရန် ART ဖြင့် ကုသရမည်ဟုဆိုထားသည်။
ဤဆောင်ပုဒ်ပါ အကြောင်းအရာများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ရည်ညွှန်းထားပြီး လိုက်နာရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လှသည့် အကြောင်းအချင်းရာများ ဖြစ်သည်ကိုလည်း ငြင်းဆိုဖွယ်ရာမဟုတ်ပေ။ မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်လည်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိနေသည်ဟု HIV/AIDS ဖြင့် အသက်ရှင် နေထိုင်သူများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာကြသည်။
HIV/AIDS ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်သူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းက မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်နည်းဟု စောကြောကြည့်မည်ဆိုပါက မည်သည့်ကောင်းကျိုးမျှ ရရှိမည်မဟုတ်ဘဲ ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူရန် စိုးရွံ့ကာ အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ကာ အသက်ရှင်စဉ်အတွင်း လူ့အဖွဲ့အစည်ကောင်းကျိုးအတွက် တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့ခြင်းစသည့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အချင်းအရာများသာ ပေါ် ထွက်လာမည်သာ ဖြစ်သည်။
HIV/AIDS ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်သူများသည် လူသားများသာဖြစ်ရာ ယင်းတို့သည်လည်း လူ့အဖွဲ့ အစည်းအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူများအဖြစ် ရှုမြင်ကြရန်လည်း လိုအပ်သည်။ နှိမ်ချခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း၊ ပြစ်တင်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ရှားကြရန် လိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့၏ဆောင်ပုဒ် ဒုတိယပိုင်းတွင် “ကူးစက် သေဆုံးမရှိရေး ART ဖြင့်ကုသပေး” ဟု ဆိုထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် HIV ဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်သူ စုစုပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ မှ ၂၂၀,၀၀၀ ကြားရှိနေသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အေအိုင်ဒီအက်စ်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားရာ ဤသူအားလုံး ART ဆေးရရှိရန် လွယ် ကူနိုင်ချေမရှိသော်လည်း အများစုရရှိရန် အစိုးရအပါအ၀င်၊ အကူအညီပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကြိုးစားသင့်လှသည်။
HIV/AIDS ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်သူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ခြင်းအပြင်၊ ART ဆေးရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြမှသာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့၏ “ခွဲခြားနှိမ့်ချကင်းစင်ဝေး ကူးစက်သေဆုံး မရှိရေးART ဖြင့်ကုသပေး” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်သည် အနှစ်သာရ ပြည့်ဝပေလိမ့်မည်။
ဦးနှောက်ကို အကြီးဆုံး လိင်အင်္ဂါလို့ တင်စား ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်က လိင်မှု ကိစ္စမှာ ဘယ်လို ကြိုးကိုင် ထားတယ် ဆို တာ ဖတ်ကြည့် ကြရ အောင်လား
Posted by drmyochit Monday, December 02, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
(၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလ...
Thank You ဆိုတဲ့ စကားထက် ကောင်းတဲ့ စကား ရှိရင် ပရိ...
(၂၇) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းအတွက် မြန်မာတို့၏ ရွှေရောင...